GAROWE, Puntland- Waxaa maanta si wanaagsan looga ciiday magaalo madaxda Puntlan ee Garowe, iyadoo ciidan ka duwanayd kuwii hore, maadama madaxda ugu sarraysa dowladda aysan ku sugnayn.
Garoonka Mire Awaare iyo guud ahaan masaajidda magaalada ayaa waxaa ku tukaday labada Rakcadood ee Ciidul Adxa bulshada rajidka ah qaybaheeda kala duwan iyadoo culimaa'uddiinku soo jeediyeen khudbado diiradda lagu saaray sida diinta Islaamku u weynaysay maalintan.
Waxay umadda ku baraarujiyeen inay sameeyaan dhammaan waxyaabah ay farayso diintu.
Waxaa sidaas si lamid ah looga ciiday magaalooyinka kale ee dalka Somalia guud ahaantood, waxaana hambalyo ku aadan maalinta diray madaxda Somalida Idilkood, kuwaasoo bulshada Alle uga baryay inay sannadkan kiisa kale ku gaaraan barwaaqo iyo bash-bash.
Mas'uuliyiinta Warsidaha Garowe Online, Tifaftirayaasha iyo dhammaan shaqalaha katirsan ayaa Halbalyo sidoo kale u diraya umadda Islaamka ah meel kastoo ay joogaan, waxaana Idin leenahay Sannadkan kiisa kale EEBBE ha inagu simo Nabad iyo Caafimaad.
GAROWE, Puntland- Gabdhaha kasoo jeeda gobolka Nugal ee ku nool dalka iyo dibadda ayaa shaaciyay inay dhisayaan cusbital loogu talo galay hooyada iyo dhallaanka kaasoo laga hirgalin doono xaafadda Waabari ee caasumadda Puntland.
Kulan galabta lagu qabtay magaal ...
​Guddiga isku dhafka ciidamada Soomaaliya oo Garowe yimid
Puntland 31.05.2016. 14:04
Waraysi: Agaasimihii Hore ee Sirdoonka Puntland [DHAGEYSO]
Soomaliya 05.05.2016. 10:30
Ciidamada Somaliya oo sheegey in saraakiil ajnabi ah dileen
Soomaliya 04.05.2016. 10:59
Weerar loo adeegsaday Toorey oo kordhiyey argagaxa Faransiiska 29.10.2020. 20:17
Turkiga oo balanqaad horleh u sameeyay Xukuumadda Soomaaliya 29.10.2020. 19:00
Miisaaniyadda Soomaaliya ee sanadka 2021 oo la meelmariyey 29.10.2020. 18:20
Madax lagu eedeeyay in ay "xoog ku haystaan" guriga caruur agoon ah 29.10.2020. 16:00
Mareykanka iyo Shiinaha oo u sacabo tumay dalab ka dhan ah Soomaaliya 29.10.2020. 12:46
Boqortooyada Sacuudiga oo xabsi u taxaabtay saddex Itoobiyaan ah 29.10.2020. 11:00